Program တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း | November 2019
မောက်ကို configure Program ကို
Windows တွင် mouse ကို configure လုပ်ဖို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ်ထိရောက်သော tool ကိုလည်းမရှိ။ သို့သော်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အပြောင်းအလဲခြယ်လှယ်များ၏ parameters တွေကိုအဘို့မလုံလောက်သေးပါ။ ခလုတ်နဲ့စာစောင်ကိုဘီးအပေါငျးတို့သပြောင်းရွှေ့ပေးရန်, ထိုအရပ်၌များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များနှင့် utilities ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကတချို့ဒီပစ္စည်းမှာဆှေးနှေးပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ disk တွေနဲ့ flash drives တွေကို format ဖို့အကောင်းဆုံး utility ကို
အတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နီးပါးတိုင်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူထိုကဲ့သို့သော disk တွေနဲ့ flash drives တွေကိုပုံစံအဖြစ်ပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်။ ပထမတစ်ချက်မှာရှိကြောက်မက်ဘွယ်သောအချည်းနှီးဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ပုံစံချပေး disk တွေအဘို့မဟုတ်အမြဲစံ tools တွေကိုကူညီပေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တဦးတည်း Third-party အစီအစဉ်များ၏ "န်ဆောင်မှု" ကိုအားကိုးဖို့ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုကောင်းသော Windows operating system ကိုအသုံးပြုမခံခဲ့ရ, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း, မတည်ငြိမ်မှုဖို့မသာဦးတည်သွားစေ, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာအမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချမည်သည့်အမှားများကိုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အလားတူရလဒ်အသုံးပြုသူလုပ်ရပ်များအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် - အရှိဆုံးဗလာကနေ system ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်ချက်ရန်။
တစ်ပြုပြင် Started, ကသစ်ကိုပရိဘောဂဝယ်ယူအကြောင်းကိုသာဂရုစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအသေးစိတ်အတွက်အနာဂတ်အတွင်းပိုင်း၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်မူကြမ်း, Pre-ပြင်ဆင်လော့။ ကြောင့်အထူးပြုအစီအစဉ်များများပြားသောရန်, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းလွတ်လပ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အခုတော့အခြေအနေအောက်ရှိစနစ်၏အချို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်ဘောင်နှင့်အညီထို program ဒါမှမဟုတ် operating system ကို disable ပါလိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့အနည်းငယ်ကိုယ်စားလှယ်များအဘို့အသငျသညျထကောက်မယ်နှင့်အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Timer ဟာ Off ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲတွင်ပထမဆုံးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုသင်ကွန်ပျူတာကို turn off သို့မဟုတ်အိပ်နှင့်ပရိုဂရမ်ကို turn off ကပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
စာသားကိုပုံနှိပ်သည့်အခါအချိန်ကုန်သက်သာလိုပါသလား? တစ်ခုမရှိမဖြစ် tool ကိုစကင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စာသားရဲ့စာမျက်နှာ dial, သင် 5-10 မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့သာစက္ကန့် 30 ကြာပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်နှင့်လျင်မြန်စွာ scan ကထောက်ခံမှုအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်မည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်သည်သင့်တယ်: စာသားနဲ့ဂရပ်ဖစ်အတူလုပ်ကိုင်သည့်ကူးယူပုံရိပ်တွေတည်းဖြတ်အလိုရှိသော format နဲ့ save လုပ်ပါ။
အဆိုပါမှတ်ဥာဏ် (RAM ကို) သင့်ကွန်ပျူတာစတိုးဆိုင်များအားလုံးပေါ်မှာအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် process လုပ်တယ်ဖျော်ဖြေနှင့်ဒေတာ CPU ကိုအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာက random access memory ကို (RAM ကို), နှင့်ကို virtual memory ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ဒါခေါ် swap ဖိုင် (pagefile.sys), ပေါ်သည်။
စာဖတ်ခြင်းများစွာသောလူများ၏အသက်တာ၌ယူထားသော, အရေးပါသောနေရာ, ဒါပေမဲ့သမားရိုးကျစက္ကူစာအုပ်များနေစရာအရပ်ကိုအမြဲလာမယ့်လူကိုရှာမတှေ့ဘူး။ စက္ကူစာအုပ်များ - ကဆက်ဆက်သည်ကောင်းပေမယ့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ သို့သျောလညျး, * .fb2 ကွန်ပျူတာကိုဖတ်ရှုဖို့မ software ကိုဒီ format နဲ့အသိအမှတ်မပြုလို့မရပါဘူး။ ဤရွေ့ကားအစီအစဉ်များကိုသင်ပုံစံ * အတွက်စာအုပ်ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
ဂီတနှေးကွေးအကောင်းဆုံး applications များ
သီချင်းနှေးကွေးရန်လိုအပ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်ဗီဒီယိုမှာနှေးကွေးသီချင်းထဲမှာမထားချင်, သင်ကတစ်ခုလုံးကိုရုပ်ရှင်ဖြည်ကြောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဂီတ၏နှောင့်နှေးဗားရှင်းလိုအပ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျဂီတနှေးဖို့အစီအစဉ်ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျ print ထုတ်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုမဆို text editor ထဲတွင်ရှိနေပါသည်ကြောင့်, အပိုဆောင်း software ကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားဖွင့် - ဒါဟာစာရွက်စာတမ်းများ၏ပုံနှိပ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရပေမည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, စက္ကူပေါ်မှာစာသား၏အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအလွန်အပိုဆောင်း software နှင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းထဲမှာ FPS တိုးမြှင့်ဖို့ Programs ကို
တိုင်းဂိမ်းကစားပွဲ၏ချောမွေ့လှပရုပ်ပုံလွှာကြည့်ဖို့လိုသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများထဲကရှိသမျှသောအသီးဖျော်ရည်ညှစ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကလက်စွဲမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမှအလေးအနက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အလားအလာအန္တရာယ် minimize နှင့်အရှင်ဂိမ်းထဲမှာဖလက်ပြကွက်အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအစီအစဉ်များရှိပါသည်။
ဒါဟာမဟုတ်အရာအားလုံး device ကိုပေါ်မူတည်လို့သင်တန်း၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်, အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည်အမြဲတစ်စျေးကြီးကင်မရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလမ်းမပေါ်တွင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကနေခွဲခြားရန်ခက်ခဲကြောင်းသို့မှသာဒါပေမယ့်စျေးပေါကင်မရာတို့ကဖမ်းမိပင်ကိုဗီဒီယိုတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးဗွီဒီယိုအရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်တွေတစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူပြိုင်ဘက်သမားရိုးကျစက္ကူစာအုပ်များဖြစ်လာကြပါပြီ: အင်တာနက်ကတဆင့်သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါသည်, သူတို့ကပိုသုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်မကြာခဏအခမဲ့သို့မဟုတ်သိသိသာသာသူတို့ရဲ့ Analog စကော်ပီထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြသည်။ အီလက်ထရောနစ်စာပေအသုံးအများဆုံးကို formats တစ်ခုမှာ - djvu - ကံမကောင်းနေဆဲစံ operating system များကတွေ့ရှိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်, djvu file ကို format ကိုကြည့်ရှုများအတွက်အထူးအစီအစဉ်လိုအပ်သည်။
အင်တာနက် - အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏သိုလှောင်ရုံ။ ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းအဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများ၏ content နှင့်အတူကျနော်တို့တောက်ပနဖူးစည်းစာတမ်းတွေနဲ့ pop-up ကြော်ငြာပုံစံတွင်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးစည်းကြပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ငါကြော်ငြာတွေဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်သလား? လုံးဝ။ ဒါဟာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ကြော်ငြာ-ပိတ်ဆို့ခြင်း software ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ ကြော်ငြာ blocker, စည်းကမ်းအဖြစ်နှစ်ခုအမျိုးအစားများနေသောခေါင်းစဉ်: ဘရောက်ဇာ၏ပုံစံအတွက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၏ပုံစံအတွက်-ons တွေကိုထည့်ပါ။
အင်တာနက်ကိုများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံး browser များတစ်ခုမှာအမည်မသိ Tor Browser ကို software ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ပိုမြန်သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အများအပြားထက်လူကြိုက်များဖြစ်လာနှင့်နေဆဲတစ်ဦးဦးဆောင်အနေအထားရရှိထားသူခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများအတင်စာမျက်နှာများ၏မြန်နှုန်းကိုကြိုက်ကြဘူး, သူတို့က Browser ကို Tor က counterparts တွေကိုရှာနေ ပို. လုံခြုံရေး, အမည်ဝှက်နှင့်မြန်နှုန်းပေးသွားမှာပါသော program တစ်ခုကိုရှာဖွေကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
စုစုပေါင်းတပ်မှူးအသုံးပြုသူများကဒီအမျိုးအစား program တစ်ခုရှိသင့်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များအပြည့်အဝထားပေးခြင်း, အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာတစ်ဦးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာဘဲဒီ tool ၏လိုင်စင်စည်းကမ်းချက်များကိုကအခမဲ့အစမ်းအသုံးပြုခြင်းတစ်လပြီးနောက်အသုံးပြုမှုကိုအခကြေးငွေအကြံပြုထားသည်။
Software ကို Portfolio
စီစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် Program ကို
တာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးဖျော်ဖြေ၏နေ့၌တစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦး။ ဒါဟာမေ့လျော့ဖို့နဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အချိန်ရှိသည်ဖို့နှင့်ဦးခေါင်း၌အလွန်ခက်အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မအရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာစီစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်များအတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူတို့ဟာမျိုး, action ကိုဖြန့်ဝေကူညီခြင်းနှင့်အုပ်စုတစ်စုကသူတို့ကိုနှင့်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးများကိုသို့မဟုတ်အခြားအမှုအသငျသညျကိုသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
AMD မှဂရပ်ဖစ်ကတ်များ overclocking များအတွက်အစီအစဉ်များ
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် PC Overclocking - Processor ကို, မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ default settings ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ရာစဉ်အတွင်းတစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှသူတို့အသစ်သောမှတ်တမ်းများတည်ထောင်ရန်ချင်သူကိုစေ့စပ်နိူးဖြစ်ကြ၏ပေမယ့်သင့်လျော်သောအသိပညာနှင့်အတူအစွမ်းသတ္တိ, ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကို virtual disk ကိုဖန်တီးဖို့အစီအစဉ်ကို
Virtual disk တွေ - software ကိုအတုယူကိရိယာသင်အတူတူကို virtual disk ကိုရုပ်ပုံများကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်နှင့်အတူ။ တခါတရံရည်ညွှန်းနှင့်ဖိုင်များရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာကနေသတင်းအချက်အလက်ဖတ်ရှုပြီးနောက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Next ကိုသငျသညျကို virtual drive တွေကိုနှင့် discs တွေကိုအတုယူအဖြစ်ဖန်တီးပုံရိပ်တွေကိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုအစီအစဉ်များ၏စာရင်းဖြစ်သည်။